अहँ, रुसका सडकमा पुटिनले ८ सय वटा सिंह छाडेका छैनन्, फेक न्युज नपत्याउनुस् ! – MySansar
अहँ, रुसका सडकमा पुटिनले ८ सय वटा सिंह छाडेका छैनन्, फेक न्युज नपत्याउनुस् !
Posted on March 22, 2020 by Salokya
सामाजिक सञ्जालमा एउटा खबर निकै सेयर भइरहेको छ। त्यसमा भनिएको छ- कोरोना संक्रमणबाट बच्ने उपायका रुपमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले करिब ८ सय बाघ र सिंहलाई सडकमा खुल्ला छाडिदिएका छन्। नागरिकहरु डराएर घरबाट ननिस्कून् भनेर त्यसो गरिएको रे। साथमा एउठा सडकमा एउटा सिंह हिँडिरहेको फोटो पनि छ। विश्वासिला मानिने वरिष्ठ पत्रकारहरुबाट नै यो खबर सेयर भएको देखेपछि धेरैले हो भन्ठाने। तर वास्तवमा यो गलत हो। कसरी ? आउनुस् विस्तृतमा बुझौँ।
सडकमा सिंह हिँडेको यो फोटो नयाँ होइन। इन्टरनेटमा बारम्बार यो फोटो अनेक हल्ला मच्चाउन उपयोग भइरहेको देखिन्छ। चार वर्षअघि जापानमा यही फोटोले तहल्का मच्चाएको थियो। जापानको कुमामोटोमा भूइँचालो गएपछि एक युवकले सडकमा सिंह भन्दै यही फोटो ट्विट गरेका थिए। झुटो जानकारी ट्विट गरेको भन्दै प्रहरीले त्यतिबेला उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
एक घण्टामा २० हजार पटक रिट्विट भएको थियो उनको ट्विट।
हेर्नुस् त्यतिबेला टोक्यो रिपोर्टरमा आएको समाचार
खासमा यो फोटो न रसियाको हो न जापानको। यो त दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसवर्गको फोटो हो। युकेको मेट्रो न्युजमा सन् २०१६ मा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार फिल्म सुटिङका लागि कोलम्बस नामको यो सिंहलाई त्यसरी सडकमा छाडिएको हो।
त्यो सिंहलाई त एक्टिङका लागि पो सडकमा पठाइएको रहेछ। त्यसैलाई लिएर के के सम्म हल्ला गर्न भ्याए मानिसहरुले। फटाहाहरुले त्यसलाई कोरोनासँग पनि जोड्न भ्याए।
अब तपाईँलाई लाग्यो होला त्यो माथि सबैभन्दा पहिलो फोटोमा त ब्रेकिङ न्युज भनेरै लेखिएको छ नि टिभीमा आएको जस्तो। त्यो चाहिँ के हो त ?
पख्नुस्, तपाईँलाई त्यो पनि के हो प्रष्टैसँग बुझाउँछु। ध्यान दिएर हेर्नुस् त त्यो फोटोमा के लेखिएको छ? दायाँ छेउमा ब्रेकयोरओनन्युज डट कम लेखिएको छ। त्यो भनेको टिभीको स्क्रिनमा देखिए जस्तो गरेर आफैले ब्रेकिङ न्युज बनाउन दिने वेबसाइट हो।
त्यो साइटमा गएर हेडलाइन र टिकर हालेपछि ठ्याक्कै यस्तै खालको टिभी स्क्रिनमा देखिएको जस्तो फोटो आउँछ। तल हेर्नुस् मैले बनाएको-
यसरी फेसबुक चलाउनेहरुलाई मूर्ख बनाइएको हो। अब फेरि त्यो साइटमा गएर अनेक फोटोहरु बनाएर मान्छेलाई उल्लु बनाउने काम चाहिँ नगर्नुस् नि फेरि !
3 thoughts on “अहँ, रुसका सडकमा पुटिनले ८ सय वटा सिंह छाडेका छैनन्, फेक न्युज नपत्याउनुस् !”
Pingback: नझुक्किनुस्, ‘आजतक’ले आर्थर गन भारतको भनेर समाचार दिएको छैन « Mysansar
सालोक्य जि, तपाईंले बनाएको newspaper त झन राम्रो पो देखियो त, अब तेही पोस्ट गर्छन् कुन दिन पाङ्रेहरुले अनी लेख्छन : भोली देखी KTM मा बाहिर निस्क्यो भने सिंह ले क्वाप्पै खाइहाल्छ रे, ओली ले भनेर जाउलाखेल चिडियाखाना बाट छोडिएको, होसियार होसियार ज्यान जोगाउन नजिकै को रुख मा चढ्नुस् भनेर ।
You are doingavery good job in cracking the “FAKE NEWS”.. Keep up the good work…